သင်၏ Vis ည့်သည်များသည်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် (သို့) ပို၍ မဖတ်လိုကြပါ | Martech Zone
သင်၏ Vis ည့်သည်များသည်ပိုမိုလေ့လာလို။ မပိုလိုပါ
သောကြာနေ့, မတ်လ 1, 2013 သောကြာနေ့, မတ်လ 1, 2013 Douglas Karr
များသောအားဖြင့်စျေးကွက်သမားများသည်အသွားအလာများများရရန်အလွန်အလုပ်များသဖြင့်သူတို့ရရှိပြီးသောအသွားအလာ၏ပြောင်းလဲမှုရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်အောင်အချိန်မဖြုန်းပါ။ ယခုအပတ်ကျနော်တို့aပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည် Multi-touch အီးမေးလ်ပရိုဂရမ် Right On Interactive မှတစ် ဦး client သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူကအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအချို့ကိုစီစဉ်ပေးသည်။ သို့သော်၎င်းသည်နိမ့်သောကလစ်နှိပ်နှုန်းနှင့်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ခံစားခဲ့ရသည်။
ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောစာသားလင့်များကိုအသုံးပြုခြင်းကိုကျွန်ုပ်ဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်စတီယာရင်များ၊ အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ အင်္ဂါရပ်များ၊ ဒီလင့်ခ်ကိုအသွင်ပြောင်းမယ်ဆိုပါစို့။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များမည်သို့ရရှိသည်ကိုဖတ်ပါ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားသုံးဆတိုး။ သင်၏လုပ်ငန်းနှင့်အတူကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးလာသည်ကိုစတင်မြင်တွေ့ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းဘယ်လိုလေ့လာပါ အလွယ်တကူပေါင်းစပ် သင့်ရဲ့လက်ရှိ applications များနှင့်အတူ။
၂ မိနစ်အတွင်းမှာဒီအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုကဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့သင်ဘာကြောင့် sign up လုပ်ဖို့လိုသလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ် သင့်ဘဝကိုပြောင်းလဲလိုက်.
ထိုင်ခုံများပြိုလဲနေပြီ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ebook အခမဲ့ရယူပါ!
အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အရေးတကြီးသဘောထားသည်သင်၏ click-through နှုန်းအပေါ်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကလစ်နှိပ်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ရန်အီးမေးလ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဆောင်းပါးတစ်ခုတွင်အခွင့်အလမ်းကိုမဖြုန်းတီးပါနှင့်။ လူတွေကမလိုချင်ဘူး ပိုမိုသိရှိရန်, ဆက်ဖတ်ရန်, စောင့်ကြည့် or စာရင်း အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာသူတို့သိရင်မဟုတ်ရင်!
မှတ်ချက်။ ။ ထိုစကားလုံးများကိုပြည်တွင်း၌ချိတ်ဆက်ထားခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်ဟုမပြောသင့်ပါ။ ပိုမိုဖော်ပြရန်ဘာသာစကားတွင် link တစ်ခုထည့်ခြင်းသည်သင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်သင်၏အကြောင်းအရာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
Tags: ပိုမိုသိရှိရန်link ကိုစာသားဆက်ဖတ်ရန်ယခုကြည့်ရှု
မတ်လ 2, 2013 မှာ 12: 41 pm တွင်
ငါဒီ post ကိုဖတ်တဲ့အခါ "Learn More" လို့ရိုးရှင်းစွာပြောထားတဲ့ Marketpath အတွက်ကြော်ငြာတစ်ခုရှိသည်
မတ်လ 3, 2013 မှာ 2: 46 pm တွင်
အရမ်းရယ်စရာ၊ @robbyslaughter: disqus! ကြောင်း CTA မြှင့်တင်ရန်အခွင့်အလမ်းကျိန်းသေရှိပါတယ်။ သူတို့ကာကွယ်ရေးမှာ၊ အဲဒီမှာအကျိုးတစ်ခုရှိတယ်လို့လွယ်တယ်။